DF Somalia oo dejisey qorshe kashifi doona Dowladda Kenya & A. Madoone oo 3 arrimood wajahaya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo dejisey qorshe kashifi doona Dowladda Kenya & A. Madoone...
DF Somalia oo dejisey qorshe kashifi doona Dowladda Kenya & A. Madoone oo 3 arrimood wajahaya
(Hadalsame) 21 Agoosto 2019 – Dowladda Dhexe ee Soomaaliya oo Mar kale KENYA dhulka ku jiiday!
Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabo fiican (Smart step) oo ah in indhaha bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Caalamka ay tusto xadgudubka Kenya iyo Axmed Madoobe, hoggaamiyeha is-doortey ee Jubbaland.
ISTARAATIIJIYADA Waxaa ka mid ah wax la yiraahdo “Wait and See,”
Haddii shalay Dowladda Soomaaliya UN-ku dhaliilay Tallaabadii ay ka qaaday hoggaamiye kuxigeenkii hore ee Shabaab Mukhtaar Roobow, Maanta ayey bulshada Caalamku oo UN-ku ugu horeeyo dareemayaan inay tallaabadaasi hore sax ahayd.
—-Maxaa xiga Afduubka Axmed Madoobe ee Doorashada Jubbaland—-
Qof walba oo falanqeeya Siyaasadda gobolka waxaa uu dareemayaa in Natiijada doorashooyinka Jubbaland tahay mid Kenya sii diyaarisay (Fixed).
Waxaa taas daliil u ah in wax isbedel ah aysan jirin marka la eego hogaankii Baarlamaanka oo sidiisii ah iyo Axmed Madoobe oo isna is-doortey (Self-elect regional leader)
Daawashada dowladda dhexe waxay keentay inay banaanka timaado loolanka ka dhex jiray ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Taasi waxay ceeb iyo waji gabax ku tahay bulshada caalamka ee bixinaya mushaarka AMISOM.
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale dhulka ku jiiday Kenya waxaana daawashada Dowladda Soomaaliya ee arrimaha Jubbaland uu banaanka soo dhigay damaca waalida ah ee Kenya iyo sida ixtiraam darrada leh ay ula dhaqantay Midowga Afrika iyo Bulshada Caalamka.
Doorashada Jubbaland waxay reebaysaa cawaaqib fool-xun waxayna ka dhigan tahay micno beel, iyadoo haddaba ay Miiska saaran tahay sidii Bulshada caalamka, Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya ka yeeli lahaayeen tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee Kenya.
Hadafka ugu weyn ee Kenya waxa uu yahay in Soomaaliya aysan marnaba kaga guuleysan muranka sohdinta Badda.
Qorshaha koowaad ee Kenya waa in Soomaaliya ay cadaadis diblamaasiyadeed Saarto si Soomaaliya gorgortan kaga gasho Muranka taagan ee dhanka Badda.
Qorshaha labaad ee Kenya waa in haddii sharciyan looga guuleysto arrinta Badda ay adeegsato xoog iyadoo isticmaaleysa hoggaamiyha is-doortey, Axmed madoobe.
Hoggaamiyaha is-doortey ee Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la saadaalinayaa inay ku adkaan doonto meel marinta hadafkiisa siyaasadeed kadib natiijada Doorashada.
Waxaa Axmed Madoobe horyaala caqabado ka badan kuwii uu horey u sii filayey iyadoona hadda ay isugu darsameen sadex culeys.
1. Mid ka haysta gudaha Jubbaland.
2. Beesha Caalamka.
3. Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Waxaa Qoray: Max’ed Firxad
Previous articleMudaharaad rasaas nool la adeegsanayo oo ka soconaya Laascaanood & sababta + Sawirro
Next articleDHEGEYSO: DF Somalia oo ka hadashay hantida qaran ee ka maqan gacmaha Dowladda + Sawirro